Global Voices teny Malagasy » Tohanan’ny CARICOM i Goiàna amin’ilay ady sisintany ifanaovany amin’i Venezoelà · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Janoary 2021 2:57 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika (fr) i Noémie Lefèvre, avylavitra
Sokajy: Karaiba, Goiana, Venezoela, Fifandraisana iraisam-pirenena, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara
« Fivoriana virtoaly fampahafantarana nataon'ny CARICOM », ny 17 Desambra 2020. Sary an'i  Dean Calma/AIEA tao amin'ny pejy Flickr an'ny IAEA Imagebank, nampiasàna ny lisansa CC BY 2.0 .
[Raha tsy anaovana fanamarihana manokana dia mankany amin'ny lahatsoratra amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra ato anaty lahatsoratra.]
Naka toerana ny Vondrompiarahamonin'ireo ao Karaiba (CARICOM ) ka hanohana an'i Goiàna amin'ilay ady sisintany  [fr] ifanolanan'ity firenena bitika ao Amerika Atsimo ity amin'i Venezoelà.
Ny 12 Janoary, nandritra ny fivoriana virtoaly  notariahan'i Keith Rowley, praiminisitra ao Trinité-sy-Tobago ary filoha amin'izao fotoana izao mitondra ny CARICOM, nitondra ny fanohanany an'i Goiàna ireo filoha any Karaiba, Goiàna firenena mpikambana ao anatin'ny CARICOM  izay toerana nanombohan'ilay orinasan-tsolika sy entona natoraly ExxonMobil ny dingam-pitrandrahany tamin'ny 2008.
Tamin'ny 18 Desambra 2020, nohamafisin ‘ny Fitsarana Iraisampirenena (CIJ) fa ananany ny fahefana hamaha io ady sisintany efa naharitra an-jato taonany io  [fr]. Na teo aza io fanapahankevitra io, Nicolás Maduro, filoha venezoeliàna, nanambara fa  [fr] « ho alainy indray » ny faritanin'i Essequibo izay takiany  ny fiandrianana ao.
Sarintany maneho ny toerana misy an'i Goiàna sy Venezoelà. Nolokoina maitso tanora ny faritanin'i Essequibo, fotory ny olana. Nolokoina volomboasary i Venezoelà. Sary  nataon'i Aquintero82, nozaraina tamin'ny alàlan'ny lisansa CC BY-SA 4.0  (Wikimedia Commons).
Kanefa, andrana mafy orina hamahàna am-pilaminana io fifandirana io ilay fifanarahana tao Zeneva tamin'ny 1966 nosoniavin'ny firenena roa tonta. Venezoelà no nandrehitra ny vanja, tamin'ny fanamafisana fa tsy ara-dariny ny nanoratana ilay didy fanelanelanana tamin'ny 1899 nanomezana tombony an'i Goiàna, zanatany britanika ,tamin'izany fotoana izany, noho izany tsy misy dikany ary tsy misy lanjany.
Nanomboka tamin'ny andian-taona 1980 no nitady izay ifampiraharahàna mivantana tamin'i Goiana i Venezoelà. Naleon'i Goiàna nangataka fanelanelanana iraisam-pirenena.
Tamin'ny 2013, toa nisy mariky ny fandrosoana hita soritra. Nifanaraka ny roa tonta fa ny profesora Norman Girvan , olon'ny anjerimanontolo avy any Jamaika, no hiasa ho toy ny Solontena Manokan'ny Firenena Mikaùbana ao anatin'ity fifandirana ity. Fomba fanelanelanana ampiasain'ny Firenena Mikambana io ho entiny mamaha amin'ny fomba diplaomatika ny fifandirana. Maty tamin'ny 2014 ny profesora Girvan.
Vao haingana, nolavin'i Venezoelà ny fidiran'ny CIJ amin'ity raharaha ity. Toa ampiasain'i Nicolás Maduro io fifandirana io  mba hakàna ny fanohanan'ny vahoaka ny governemantany ao anatin'ny olana sôsialy sy toekarena izay tsy mitsahatra ny miharatsy.
Ny fanontaniana mibahan-toerana izany izao dia ny hoe : hiova ve izany ny tetikadin'i Nicolás Maduro taorian'ny fandraisana toerana nataon'ny CARICOM hanome tombony an'i Goiàna? Ankoatra ny zavatra hafa, dia nambaran'ny vondrompiarahamonin'ireo ao Karaiba fa manahirana azy  « ilay didy sy ireo fanambaràna tany aloha nataon'i Venezoelà momba io ady sisintany ifanaovany amin'i Goiàna io ». Nanambara ihany koa ny CARICOM fa nanohana ny dingana ara-pitsaràna nataon'ny CIJ :
Amafisin'ny CARICOM tanteraka ny fanohanany tsy misy fepetra sy tsy mivadika ny fitahirizana ary ny fikajiana ny fiandrianana sy ny maha-iray tsy mivaky ny faritanin'i Goiàna. Melohin'ny CARICOM tanteraka izay rehetra herisetra ataon'i Venezoelà amin'i Goiàna.
Ety ankilany, Irfaan Ali, filohan'i Goiàna, dia namaritra  ireo fanehoankevitr'i Nicolás Maduro ho « tena mampiahiahy », ary nanamafy  fa izay rehetra andrana mety hataon'i Venezoelà hamerina hamaritra « samirery» ny sisintany dia tsy ho ekena manoloana ny lalàna, no sady tsy ho ankatoavin'ny sehatra iraisampirenena:
Ampahatsiahiviko fa ny fiandrianana eo amin'io morontsiraka io, sy ny faritany ifamatorany, dia nomena an'i Goiàna (fony vaninandro naha-Goiàna Britanika) taorian'ny fitsaràna fanelanelanana natao tany Parisy tamin'ny 1899. Mahazo toky i Goiàna fa ho hain'ny Fitsaràna Iraisampirenena (CIJ) ny mampanaja tsy misy fihambahambàna ny maha-manankery sy ny maha-ara-dalàna iny fanapahankevitra iny.
Indrisy anefa, tamin'ny famoahana fa hoe an'i Venezoelà ireo faritry ny ranomasina mifanakaiky amin'io faritra io, dia fotokevitra fototra roa raha kely indrindra ao amin'ny lalàna iraisampirenena no voahitsakitsaka.
Ny fanitsakitsahana voalohany dia ny momba ny hoe tsy misy na firenena iray aza afaka hamaritra samirery ny sisintaniny iraisampirenena[…].
Ny fanitsakitsahana faharoa […] dia ny mifandray amin'ny fisian'ilay fotokevitra fototra milaza hoe « ny tany no mavesadanja noho ny ranomasina » araka ireo fepetra voapetraka tsara ao anatin'ny lalàna iraisampirenena […].
Ny fiandrianampirenen'i Goiàna dia napetrka ho amin'ny morontsiraka andrefan'ny onibe Essequibo ary tonga hatrany amin'ny Punta Playa, mifampitohy amin'izany dia i Goiàna afaka misitraka ny fiandrianany sy ny zony tsy misy fangarony amin'ny ranomasina sy ireo harena anaty ranomasina mifandray amin'izany.
Ao anatin'io faritra misy harena an-dranomasina io i Liza, ilay toerana fitrandrahana solika midadasika iasan'ny ExxonMobil. Afaka mamokatra 120 000 barilan-tsolika isanandro ary hamadika tanteraka ny tontolon'ny toekaren'izay firenena manana fiandrianana eo aminy.
Io resaka fiandrianampirenena io no ivon'ny fifandirana naroso ho eo anatrehan'ny CIJ. Resy lahatra  i Goiàna fa hiaro azy ny CIJ. Misy fanontaniana iray mbola tavela anefa : hanaiky izay fanapahankevitra izay ve i Venezoelà ?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/01/27/151249/
 pejy Flickr an'ny IAEA Imagebank, : https://www.flickr.com/photos/iaea_imagebank/
 ady sisintany: https://fr.globalvoices.org/2021/01/16/260903/
 fivoriana virtoaly: https://guardian.co.tt/news/pm-sides-with-guyana-in-venezuela-dispute-6.2.1274998.ce82e8dc92
 firenena mpikambana ao anatin'ny CARICOM: https://caricom.org/member-states-and-associate-members/
 efa naharitra an-jato taonany io: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guayana_Esequiba
 fifanarahana tao Zeneva tamin'ny 1966 : https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Agreement_(1966)
 Nifanaraka : https://caricom.org/prof-girvan-to-continue-as-un-good-officer-in-venezuela-guyana-border-dispute/
 profesora Norman Girvan: https://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Girvan
 manahirana azy: https://caricom.org/statement-by-the-caribbean-community-on-the-guyana-venezuela-border-controversy/
 toerana fitrandrahana solika midadasika iasan'ny : https://www.youtube.com/watch?v=wuNhqTX4gyw